खुसीको खबर,लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकियो तर भारतमा रुवाबासी …हेर्नुहोस! – Nepal Online Khabar
खुसीको खबर,लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकियो तर भारतमा रुवाबासी …हेर्नुहोस!
काठमाडौं,नेपाली सेनाले भारतले अ,तिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक जाने वाटो निर्माणको आधा काम सकेको जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सोमवार ट्वीटमार्फत लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकिएको जानकारी दिनुभएको हो । लिपुलेक जाने ट्रयाक खोल्न सेनाको एक टुकडी केही समयदेखि सो स्थानमा कार्यरत रहेको छ’।
प्रवक्ता पौडलले सेनाका जवानले बाटो खन्दै गरेको तस्विर समेत सार्वजनिक गर्दै ट्रयाक निर्माणको अहिलेसम्मको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो ।प्रवक्ता पौडेलका अनुसार घाँटीबगरदेखि घागंरुसम्मको ट्रयाक खोल्ने क्रममा २ सय ५० मीटर ट्रयाक खोलिसकिएको छ । प्रवक्ता पौडेलले स्थलगत तस्बिर र नक्सा सार्वजनिक गर्दै सो समाचार सेयर गर्न पाउँदा खुसी लागेको आफ्नो अनुभुति समेत साटनुभएको छ । ´उहाँका अनुसार सो सडकख,ण्डको पुरा ट्रयाक ४५० मीटर रहेको छ’।
केही समय अघि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्र,हरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सो क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।´ सेना र सशस्त्र प्र,हरी प्रमुखद्वय त्यहाँ कार्यरत सु,रक्षाकर्मीको आत्मबल बढाउन सो क्षेत्रको भ्रमणमा जानुभएको हो । भारतबाट अ,तिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन संसदबाट पारित भएपछि नेपालको सि,मा क्षेत्रमा सु,रक्षा बढाईएको छ’। सु,रक्षा क्षेत्रका प्रमुखहरुको भ्र,मणले पनि छुट्टै सन्देश दिएको थियो ´।
नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्नु र दुई सु,रक्षा निकायका प्रमुखको भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले पनि निकै चासोका साथ हेरेका थिए । जुन परिवेशमा भ्रमण भएको थियो, त्यसले कु,टनीतिक तथा सामरिक दुवै तहमा एउटा सन्देश प्रवाह गरेको अनुभुती गरिएको थियो । ´यो विषयले मिडिया र सामाजिक संजाललाई पनि त,रंगित गर्‍¥यो। भारतीय मिडियामा समेत यो भ्रमणको पर्याप्त चर्चा भयो भने उत्तरतिरबाट पनि यसमा चासो प्रकट भएको थियो’।
Prevमहामन्त्री कोइराला भन्नुहुन्छ : राष्ट्रपति भण्डारीका कारण गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्ने जमात बढ्यो…हेर्नुहोस् ।
Nextदेशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउन एकतावद्ध भएर अघि बढ्नु जरुरी छ : प्रधानमन्त्री ओलि…हेर्नुहोस् ।